Ny Shanghai International Watersports Exhibition 2021 dia natao tao amin'ny Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center tamin'ny 1 ka hatramin'ny 3 aprily, ary niara-niasa tamin'ny Asian Boat Show. Nanao sonia fifanarahana tamin’ny mpikarakara ny famatsiana dobo ho an’ny fampirantiana. Napetraka ny dobon-drano vy misy anay...
Ny tanky fitehirizana solika azo rava dia fomba mahomby amin'ny fitahirizana ranon-javatra betsaka ao amin'ny toeram-piompiana solika na toerana fitehirizana lehibe. Naterina mihodinkodina ary mora apetraka, ny fiara mifono vy azo ampiasaina dia safidy tsara ho an'ny fitahirizana solika vonjimaika d...
Matetika fantatra amin'ny anarana hoe pillow bladder na lay-flat style tank, ireo kitapo ireo dia mijanona ho fomba ara-toekarena sy malaza foana amin'ny fitahirizana na fitaterana rano azo sotroina sy orana, na gazoala sy solika. Mora miforitra ary somary maivana, azo entina any amin'ny toerana mitokana tsy misy na inona na inona, na feno rehefa config...
PVC Fiompiana trondro trondro ho an'ny fiompiana trondro aquaculture, kolontsaina vonjimaika, fampirantiana trondro fitaterana trondro, famolavolana miforitra miaraka amin'ny fanohanana sodina PVC. Izahay dia mamatsy Intensive Recirculating Aquaculture Systems (RAS) . Afaka mamokatra trondro be dia be amin’ny toerana kely, mampihena ny fampiasana ny tany ho an’ny trondro...